မတ်လ 22, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 1 မှတ်ချက်လေး
ဒီနေ့ဗားရှင်းထုတ်နေကြတယ် 0.1.0, ဒီလွှတ်ပေးရန်အရှိဆုံးသိသာသောအပြောင်းအလဲအသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲပစ်မှတ်ဘာသာစကားဖို့စာမျက်နှာပေါ်မှာရှိသမျှအကြောင်းအရာဘာသာပြန်ဆိုတံ့သောအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက် mode ကိုများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ရလဒ်တိုးတက်လာဖို့လူ့ဘာသာပြန်ချက်တွေအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် (သူတို့ကမလိုအပ်!).
အကြှနျုပျတို့သညျဤစာမျက်နှာ sidebar မှာပေါ်မွငျနိုငျသောက default စာရင်းဘာသာစကားမြားစှာကိုလညျးကဆက်ပြောသည်ပါပြီ.
fixed ခဲ့ကြသည်နှင့်အချို့ code များ IE8 များအတွက်ပိုကောင်းထောက်ခံမှုထည့်သွင်းဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်ယခင်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့စွမ်းဆောင်မှုနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကိစ္စရပ်များကို, လာမယ့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်!
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: လွှတ်ပေး
မတ်လ 22, 2009 တွင် 6:49 ညနေ